होली पार्टीमा के खाने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
होली पार्टीमा के खाने ?
मेरो लाइफस्टाइल || 28 March, 2021
होली पर्व मनाउँदा बालबालिका देखि वृद्धवृद्धाको मुहार एक किसिमको खुसी देखा पर्छ । होलीको आगमनले घरमा अलग किसिमको माहौल बन्छ । रङ्ग खेल्ने देखि विभिन्न किसिमका परिकार बनाएर खाने जस्ता कुराले खुसीयाली वातावरण बनाउँछ । तर यस्तो प्रकारको मस्तीको माहौलमा खान पानमा धेरैले ध्यान दिँदैनन् ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले नयाँ मोड लिएको अवस्थामा तपाईँले होलीको अवसरमा शरीरको इम्युनिटी बढाउने किसिमका खानेकुराहरू तयार पारेर खान पनि सक्नुहुन्छ ।
होलीमा मौसम केही गर्मी नै हुन्छ । यो बेला चिसो पेय पदार्थ सेवन गर्ने चलन छ । अन्य किसिमका कृत्रिम चिसो भन्दा फलफूल वा ड्राई फ्रुट्स मिक्स गरिएको मिल्क सेकको सेवन गर्दा शरीरमा इनर्जी साथै इम्युनिटी पावर पनि बुस्ट हुन्छ ।
खरबुजाको जुसले डिहाइड्रेसन लगायत कोलेस्ट्रोलको समस्या पनि कम गर्छ । होली गर्मी सिजनमा हुने हुनाले होलीको पार्टीमा यसको प्रयोग गर्ने हो भने यसले तपाईँको स्वादको मात्र ख्याल गर्दैन स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरू समाधान समेत गर्छ ।
होलीमा नयाँ नयाँ र मिठा परिकार बनाएर पार्टी गर्ने चलन छ । यस्तोमा तेलमा डिप फ्राई गरेर बनाइएको खानेकुरा भन्दा उसिनेर पकाइने किसिमका खानेकुराहरू खानु स्वास्थ्यकर हुन्छ ।
ड्राई फ्रुट्सको मिठाई
भनिन्छ की, कुनै पनि पर्व गुलियो वा मिठाई बिना अधुरै हुन्छ । तर धेरै गुलियो खानु पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नै हुन्छ । यस्तोमा ड्राईफ्रुट्स र सख्खरले बनेको मिठाई बनाउने हो भने यो स्वादिष्ट पनि हुन्छ र स्वास्थ्य वर्द्धक पनि ।
होलीको पार्टीमा सिजनल फ्रुट्स राख्नु एकदमै राम्रो विकल्प हो । अहिले बजारमा पाइने सुन्तला, स्याउ खरबुजा, अङ्गुर, भूइँकटहर जस्ता फलफूलले इम्युनिटी पावरलाई बुस्ट गर्दै शरीरलाई स्वस्थ पनि बनाउँछ । यस्तै यो पर्वमा तपाईँले फ्रुट चाट र फ्रुट सलाद पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ।